सशस्त्र प्रहरी हवल्दार नै लागूऔषध कारोवारमा संलग्न, यस्तो सम्म सेटिङ ! « Pokhara Pati
सशस्त्र प्रहरी हवल्दार नै लागूऔषध कारोवारमा संलग्न, यस्तो सम्म सेटिङ !
प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन २८, शनिबार
काठमाडौं, २८ फागुन । लागुऔषध ब्राउन सुगरको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारसहित ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
लागुऔषध कारोबारीको जालो चिर्दै जाँदा सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत् हवल्दार खगेन्द्र भुजेलको पनि संलग्नता भेटिएको हो । मोरङ दुलारी घर भएका सशस्त्र प्रहरी हवल्दार भुजेल दुई नम्बर हेडक्वाटर झापामा कार्यरत छन् ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ती ११ जनालाई विभिन्न मितिमा ३२२.६ ग्रामको ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरेको थियो । यसरी पक्राउ पर्नेहरुमा म्याग्दी घर भई हाल काठमाडौं बुढानिलकण्ठ बस्ने २५ वर्षीय लालबहादुर बुढाथोकी छन्। उनको साथबाट प्रहरीले सय ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको छ। काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित गेष्ट हाउसबाट अजय तामाङलाई २९४ ग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।
अन्य पक्राउ पर्नेमा दोलखाका कौशल बस्नेत, सिन्धुपाल्चोकका समीर घले गुरूङ, झापाका अन्जान राई, सञ्जय लक्सम्बा, पुकार गुरूङ, प्रविण भण्डारी, सुनिल ताजपुरिया, भारत दार्जिलिङका श्यामल सिंह छन्।
सशस्त्र प्रहरी हवल्दार नै लागूऔषध कारोवारमा संलग्न
लागुऔषधको कारोबारमा जोडिएका सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत् हवल्दार भुजेलको कनेक्सन भारतीय नागरिक श्याम सिंहसँग जोडिएको ब्युरो प्रमुख एसएसपी हृदय थापाले बताएका छन् ।
सिंहले भुजेललाई, भुजेलले सुनिल ताजपुरियामार्फत कौशल बस्नेतलाई ब्राउन सुगर उपलब्ध गराउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ।
यसैगरी, लालबहादुर बुढाथोकीले कौशल बस्नेतसँग खरिद गर्ने गरेको, बस्नेतले समीर गुरूङलाई बिक्री गर्ने गरेको खुलेको छ।
प्रविण भण्डारीले भारत सिलिगुडी गएर लागुऔषध खरिद गरी अजय तामाङमार्फत् अन्जान राईलाई बिक्री गर्ने गरेको खुलेको थापाले बताए। उनीहरू सबैलाई लागुऔषध मुद्दामा अनुसन्धान भइहेको प्रहरीले जनाएको छ। डनन्युजबाट ।